Kobo Elipsa, ilay mpamaky e-mpamorona hybrid izay misy notebook izao [Fanadihadiana] | Ireo mpamaky rehetra
Michael Hernandez | | mpamaky, Hardware
Kobo dia toa tapa-kevitra ny hanohy hanolotra safidy hafa, rivotra madio ary fanavaozana izay toa tsy mitombina ny marika e-book hafa an-taonany maro. Noho izany, tsy manambara am-pifaliana be izahay ny karazan-baovao rehetra fa mandray ireo karazana fitaovana ireo rehefa mandeha ny fotoana. Vao haingana izahay no nilaza taminao ny momba ny Kobo Elipsa, fitaovana hybrid izay tian'i Kobo hanavao ny foto-kevitry ny e-Reader.
Izahay dia mijery lalina ny Kobo Elipsa vaovao, e-boky izay mivadika ho kahie indraindray noho ny stazy mahaliana sy ny zava-baovao teknika maro. Jereo miaraka aminay lalina ity Kobo Elipsa vaovao ity sy ny tanjany rehetra, ary koa ny fahalemeny mazava ho azy.
Tamin'ity indray mitoraka ity dia tadiavinay araho ny fanadihadiana miaraka amin'ny lahatsarin'ireo mpiara-miasa aminay avy amin'i Actualidad Gadget izay hahafahanao mahita ny tsy fandefasana boaty amin'ny fitaovana, ny atin'ny boaty ary ny fiheverana voalohany haingana. Manoro hevitra anao izahay hijery izany.
1 Volavola: fifangaroana eo amin'ny fampiononana sy ny hybridization
3 Fahaiza-mizaka tena sy fahitana
4 Sleep Cover sy Stylus, kojakoja roa manova ny zava-drehetra
Volavola: fifangaroana eo amin'ny fampiononana sy ny hybridization
Ny fitaovana Kobo vaovao, toy ny mahazatra, dia novokarina tamina plastika mainty izay mahasalama ny dian-tanan'ny rantsan-tànana ary somary maivana. Midika amin'ny lanjany 383 grama io, zavatra maivana ho an'ny vokatra mirefy 193 x 227,5 x 7,6 milimetatra. Manolotra antsika efijery manodidina ny 10,3 santimetatra, mitovy amin'ny takelaka kahie iray. Ho fanampin'izay, hitanay fa liana ny amin'ny lamosina manana andian-pad mba hanohanana ny fitaovana amin'ny fanoratana, amin'ny fomba mitovy fa ny iray amin'ny lafiny dia mahia noho ny iray hafa. Ny lafiny "matevina" dia eo no toerana misy ny seranan-tsambo USB-C, ary koa ny bokotra tokana ao anatiny mba hifohazany sy hanidiana ilay fitaovana, toy ny sisa amin'ny bokin'i Kobo.
Ny Kobo Elipsa dia nahazo aina taminay nandritra ny andro maro namakiana, raha ny marina dia gaga izahay noho ny hazavana omena ny habeny, na izany aza, tsy maintsy milaza isika fa miova ny toe-javatra raha samy mampiasa ilay izy na ilay penina isika, izay misy ny lanjany mitombo be. Toy izany koa, manolo-kevitra izahay fa raha hampiasa azy manokana amin'ny famakiana fotsiny dia ampiasainay tsy misy Fonon-torimaso, izany hoe amin'ny fonony vita amin'ny fingotra ihany, hamonjy antsika sasany fanaintainan'ny sandry hafa. Toy izany koa no miseho amin'ny haben'ny efijery goavambe, satria manana sisiny ankavanana tononina izy, hamela antsika hamaky nefa tsy mahita fetran'ny fihetsika.
Kobo dia niasa araka izay tratra niaraka tamin'ny fetra teknika, izay na dia tsy manolotra fametrahana fitaovana tsy mahazatra aza izy ireo, dia gaga izahay tamin'ny valiny farany. Raha ny momba ny efijery dia manana tontonana izahay Taratasy E-Ink 1.200 an'ny 10,3 santimetatra, amin'ny totalin'ny 26,16 santimetatra, manome antsika vahaolana 227 DPI sy 1404 x 1872 amin'ny tahan'ny.
Amin'ny haavon'ny fahatsiarovana anatiny dia hankafy tsy latsaky ny 32 GB isika, fa na eo aza ny fahitana boky mihoatra ny ampy amin'ny boky elektronika, ary izany dia azo ahitsy raha miasa amin'ny PDF sy ny famoronana kahie isika (izay horesahintsika avy eo).
Izany rehetra izany dia afindra amin'ny alàlan'ny fanodinana irayr multi-core hatramin'ny 1,8 GHz fa i Kobo dia nitaingina, miasa rafitra fandidiana izay saika tsy misy fiovana, indrindra raha ampitahaintsika amin'ny kinova taloha toy ny Aura, izay ampian'izy ireo fotsiny ilay faritra "Notebooks" vaovao. Manana fahatsiarovana RAM 1 GB izahay izay mampihetsika maivana ny Rafitra miasa ary miaraka amin'ny haavon'ny fifandraisana toa ny Wi-Fi sy seranan-tsambo USB-C.
Fahaiza-mizaka tena sy fahitana
Ny Kobo Elipsa dia miakatra ao anaty bateria 2.400 XNUMX mAh, Tsy ratsy velively izany raha heverintsika fa boky elektronika izy io, ary indrindra raha manana fiakarana amin'ny famirapiratan'ny efijery Kobo Fahazavana Mihoatra ny 10% mihoatra ny totaliny isika. Ny fizakantena dia miankina betsaka amin'ny fampiasantsika ny Stylus sy ny famirapiratan'ny jiro, tsy afaka nandany azy io ara-bakiteny izahay ary tsy nahita ny fihenan'ny bateria mazava kokoa noho ny amin'ny fitaovana Kobo hafa raha toa ka tsy mamaky boky fotsiny izahay.
Ny efijery izay noresahintsika teo aloha, dia nihatsara fatratra tamin'ny resaka jiro, raha ny marina, Tsy ilaina izany Top 10% izany hijerena ny atiny eny ivelany ary saika hiteny aho hoe toa tafahoatra izany amiko, satria mety mandreraka antsika koa izany. Ny marina dia ato amin'ity Kobo Elipsa ity no ahitantsika ny jiro tsara indrindra ho ahy. Manararaotra ny fiasan'ny Fahazavana sy ny maody amin'ny Alina alina ahafahantsika manatsara ny fandeferantsika amin'ny famakiana amin'ny tarehin-jiro ratsy.
Sleep Cover sy Stylus, kojakoja roa manova ny zava-drehetra
Ny Pack voadinika, izay efa amidy ao amin'ny tranokala Kobo, dia hanampy Sleep Cover, fonony izay ho fiarovana ny Elipsa antsika aloha nefa tsy be pitsiny loatra, ary ahafahantsika manampy "ridao" izay Izy io dia hiasa ho toy ny fanohanana ny stylus ary ho an'ny Elipsa raha te-hiasa aminy isika. Ny kalitaon'ny hoditra simile ampiasaina amin'ny maintso ho an'ny fitsapana dia mahagaga, ary koa ny fametrahana azy mora foana. Gaga aho fa afaka niaraka taminay tamin'ny alàlan'ny Cover Cover ny stylus. Hitako fa singa tena ahazoana aina sy mahafinaritra ampiasaina izany, na dia efa nolazainay teo aza, raha hamaky tsy tapaka izahay, ny tanjona dia ny manala ny "ridao" avy amin'ny Cover Cover izay manakana sy mampihetsika ny Kobo Elipsa rehefa apetraka dia esorina.
Amin'ny lafiny iray, ny Stylus dia fitaovana tsotra iray izay hiasa amin'ny bateria ary tsy fantatsika am-pahamarinana ny fahaleovan-tenany amin'izao fotoana izao. Ny bateria tafiditra dia ao anaty boaty iray ihany (zavatra tokony hankasitrahana), ary ity iray ity dia refy mahazatra sy milamina ary maivana. Ny nib dia azo soloina ary mamaly ny tsindry, manome valiny marina tsara na eo aza ny 'fidirana lag' ny efijery fanoratana elektronika. Noho izany dia manana bokotra mivantana roa misy fiasa samy hafa ao amin'ny stilosy isika ary ahafahantsika manitsy PDF, mamorona kahie manokana ary manoratra mivantana amin'ny boky vakiantsika ihany koa.
Ny zavatra niainako namaky niaraka tamin'ny Kobo Elipsa dia tsara kokoa, na dia boky e lehibe loatra aza angamba ity raha toa ka hampiasa azy io hamakiana fotsiny isika. Etsy ankilany, Manana hybrid miaraka amina kojakoja toy ny fonony sy ny fahafaha-manararaotra ny fahaiza-manaon'ny stylus izay manao azy ho fitaovana boribory somary boribory izy. Vokatra izay mazava ho azy fa tsy mifantoka amin'ny mpampiasa izay manomboka amin'ny boky elektronika, saingy mety ho plus plus ilaina ho an'ireo mpampiasa efa mahalala azy io.
Kitapo feno izay misy an'i Stylus sy Cover Cover
Hybrid feno voalohany eny an-tsena
Hevitra tsy manam-paharoa hatreto eny an-tsena
Taham-pamelombelona vaovao an'ny Carta 1200 vaovao
Tsy misy tutorial fampidirana momba ny UI
Ilaina ny valiny haingana kokoa ao amin'ny OS
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » Kobo Elipsa, ilay mpamaky e-mpamorona hybrid izay misy notebook izao [Review]
Mampiseho amintsika ny 'tsinay' an'ny Kobo Elipsa i Kobo